Daawo Sawirro: Maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo laga xusay Garowe |
Daawo Sawirro: Maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo laga xusay Garowe
Garoowe (NN) 15/05/2016
Maanta oo Axadda waxaa lagu qabtay Garowe xus lagu maamuusayey maalinta dhalinyarada Soomnaaliyeed oo 15ka May ah, maasuuliyiinta dowladd, kuwa Ha’yadaha iyo dadweyne kale ayaa ka qayb galay.
Waxaana munaasabadda looga hadlay 73 guuradii kasoo wareegtay markii la asaasay ururkii dhalinyarada ee xornimo doonka sanadkii 1943-dii.
Masuuliyiinta iyo dadkii kale ayaa hambalyo udiray dhamaan dhalinta Soomaaliyeed, waxaana laga hadlay dhibaatooyina soo wajahay oo ay ugu weyntahya tahriibta.
Waxaa jiray tartan orad ah oo loo qabtay dhalinyaro ka socotay shanta degmo ee gobolka Nugaal ka kooban yahay, waxaana kaalimaha kowaad iyo labaad galay degmada Garowe, halka degmada Den gorayo ay gashay kaalinta sedexaad.
Munaasabadda oo lagu qabtay Jaamacadda PSU, waxaa masuuliyiintii hadalka ka jeedisay kamid ahaa Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi iyo wasiirka Shaqada,Shaqaalaha, dhalinyarada iyo Cayaaraha.
Wasiirka Dhalinyarada iyo Cayaaraha Puntland Cabdiraxmaan Shiikh Axmed Cabdullaahi ayaa sheegay in dhalinyaradu sanadihii dambe la kulmayeen dhibaatooyin ay ugu horayso Tahriibka iyo shaqo la’aan soo wajahda, wuxuuse tilmaamay in wasaaraddu da daal ugali doonto sidii looga hortagi lahaa arimahaas.
Dhalinyarada ayuu ugu baaqay inay ka waan toobaan Tahriibta oo wasaaradda kala shaqeeyaan barnaamijyada looga hortagayo.
Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi ayaa uhambalyeeyey dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaa uuna sheegay in 15ka May ay tahay maalin ku weyn umadda Soomaaliyeed, islamarkaana ay tahay markii la asaasay ururkii Dhalinyarada ee gobonimo doonka SYL.
Wuxuu tilmaamay in baarlamaanka Puntland uu dhawaan meel marin doono Siyaasada dhalinyarada, isagoo ugu baaqay inay ka joogsadaan Tahriibka.
Sanad kasta maanta oo kale waxaa meelo kamid ah dalka laga xusa 15ka MAY oo ah markii la asaasay ururkii SYL, waxaana sanadihii dambe xusku kusoo aadayey xili ay dhalinyarada Soomaaliyeed wajahaan xaalado adag oo ay qayb ka yihiin Tahriibka iyo Shaqo la’aanta.